Raw Oxymetholone (Anadrol) vovoka Fambolena sy orinasa mpamatsy - Factory
Ny poeta Oxymetholone (Anadrol) dia steroid am-bony izay anisan'ny tarika medikaly fantatra amin'ny hoe anabolic steroids ary io dia ny mari-pamantarana ho an'ny Oxymetholone. Ny fampiasana ny steroids anabolic dia manohy manao fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena amin'ny fampiasana bodybuilder ary mampiasa azy ireo ny atleta mba hijanona amin'ny tendrony ambony. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mandray ireo steroïd ny fampiroboroboana sy fampiroboroboana mahery vaika amin'ny fanantenana fa hanatsara ny fahaiza-manaony izy ireo hampiakatra lanja mahery.
Roim Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1) video
Roahina Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1) Description
Ny vovony Oxymetholone roah dia fihinan'ny amabolika amabolika matevina ary ny 17alpha-methylated derivative ny dihydrotestosterone, ary ny androgenic activity. Na dia manana fiantraikany kely aza ny oxymetholone noho ny famenoana ny receptor androgen (AR), dia manasongadina ny fampitandreman'ny AR-mediated, izay manentana ny famokarana proteinina sy ny famokarana erythropoietin. Ity dokotera ity dia mety hamporisika ny fitomboan'ny taova, miteraka ny famokarana hemoglobinina sy ny fanabeazana mena, ary mampiroborobo ny hamaroan'ny taolana.
Ny vovon-tsolika Anadrol izay naseho tamin'ny fikarakarana ny anemia vokatry ny tsy fahampian'ny famokarana sela mena. Noraisina matetika ny tsy anemia, ny tsy fahampian-drà tsy mety, ny myelofibrosis ary ny anemia ipoplastika noho ny fitantanana ny fanafody myelotoxika. Ny oxymetholone dia tsy tokony hanolo ny fepetra fanohanana hafa toy ny fampidiran-dra, fanamafisana ny vy, ny asidra folakany, ny vitamin B12 na ny tsy fahampian'ny pyridoxine, ny fitsaboana antibaktera sy ny fampiasana kortika.
Rojo Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1) Specifications
Product Name Rojo Oxymetholone (Anadrol) vovoka
Anarana simika Anadrol, CI-406; NSC-26198
molekiolan'ny Formula C21H32O3
molekiolan'ny Wvalo 332.48
mitsonika Point 172-180 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 8 - ora 9
Color Fotsy hoditra malefaka
Solubility <0.1 g / 100 mL amin'ny 23 ° C
Application Ny steroide anabolic, izay endri-tsoratry ny hormone mitovy amin'ny testosterone ary ampiasaina mba hanatrarana karazana anemia (tsy fahampian'ny sela mena), anisan'izany ny tsy fahampian-tsakoly vokatry ny fitsaboana simika.
Inona no atao hoe Poids Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1)?
Oxymetholone, mivarotra eo ambanin'ny anaran'ilay anarana hoe Anadrol sy Anapolon, ny hafa, dia androgen sy anabolic steroid (AAS) fanafody izay ampiasaina voalohany amin'ny fitsaboana ny anemia. Ampiasaina ihany koa izy hanasitranana ny osteoporose, ny aretina mitaiza ny SIDA, ary hampiroboroboana ny fahabetsehina sy ny fitomboan'ny taova amin'ny toe-javatra sasany.
Ahoana ny Rohdy Oxymetholone (Anadrol) (434-07-1) asa
Roahina Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1) Dosage
Anadrol dia azo atao amin'ny fomba roa: amin'ny orana sy amin'ny tsindrona. Ny takelaka Oral Oxymetholone dia atolotra ao anaty tavoahangy misy pilià voafantina 100. Rehefa maka Anadrol am-bava, ny dosage isan'andro Oxymetholone isan'andro ho an'ny atleta lahy dia 1-5mg isaky ny kilao amin'ny lanjan'ny body. Ny ADN fampiasana Anadrol (Oxymetholone) dia 50 mg isan'andro. Raha afaka mandefitra izany ny vatanao, dia tsy misy olana amin'ny fampakarana ny dosie Oxymetholone tsikelikely amin'ny 100 mg isan'andro.
Rano Oxymetholone (Anadrol) vovoka (434-07-1) Benefits
(1) Vokatra haingana kokoa
(2) Mampiroborobo ny harena betsaka izy io
(4) Mampitombo ny fiaretana
(5) Manamora ny fahaverezan'ny fatotra
(6) Manampy anao haingana haingana
(7) Manampy amin'ny fisorohana ny ratra ny fery
(8) Manakana ny haavon'ny SHBG izany
Buy Buy Oxymetholone (Anadrol) avy amin'ny Buyaas.com
Rano Methandrostenolone (Dianabol) vovoka (72-63-9)